प्रहरीको पनि समायोजन, के–के हुन् समायोजनका ६ आधार? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रहरीको पनि समायोजन, के–के हुन् समायोजनका ६ आधार?
काठमाडौं, चैत १। ज्येष्ठता र कार्यरत क्षेत्रलाई प्राथमिकताका राखेर नेपाल प्रहरीको समायोजन हुुने भएको छ । सरकारले प्रहरीको समायोजनसम्बन्धी ऐनको विधेयक मंगलबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । विधेयकमा समायोजनका ६ आधार तय गरिएको छ ।
जसमा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठतालाई प्रमुुख आधार तोकिएको छ । त्यसका साथै श्रीमान्–श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एकै प्रदेशमा समायोजन गरिने उल्लेख छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस एघार एसएसपी डिअाइजीमा बढुवा सिफारिस, घिमिरे र क्षेत्री पहिलो नम्बरमा